တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: လိမ္မော်သီး နဲ့ angry bird
Posted by မေဓာဝီ at 7:05 PM
ဟားဟား မမေ ကတော့
9/19/2014 7:22 PM
တကြောင်းဆွဲပန်းချီ တဲ့။ ခ် ခ် ခ်။
အန်းဂရီးဖြစ်လွန်းလုို့ ကလေးတွေက အန်းဂရီးလုို့ ပြောချင်တာကို မပြောရက်လုို့ ဘာ့ဒ် ကလေး ထည့်ပေးလုိုက်တာ ဖြစ်မယ်။း)
ဒါဆုို နာမည်သစ်တစ်ခုတော့ ရသွားပြီပေါ့။
ပန်းချီဆရာမကြီး ဒေါ်မေနန္ဒာ (အန်းဂရီးဘာ့ဒ်)
9/19/2014 9:51 PM
အားမ​လျှော့နဲ့ စိတ်​မကျနဲ့ ဒီလိုပဲ ဆွဲသာဆွဲ ညီမေ​မေ၊မချစ်​လည်း စနစ်​တကျမတတ်​ဘဲ ကိုယ်​ဆွဲတတ်​သလို ချ​နေတာပါပဲ :-)
9/20/2014 1:32 AM
ပန်းချီဆွဲပညာကို သဘောကျခဲ့ပေမယ့် ငယ်ငယ်ထဲက ကြိုးစားဆွဲသမျှ မမေပြောတဲ့ ပန်းသီးပုံထက်ဆိုးနေလို့ ... ဒီပညာဖက်မှာ ပါရမီမပါဘူးထင်ပါရဲ့ .... :D
ထိုနည်း၎င်းပဲ ... ကဗျာစပ်လိုက်ရင်လဲ အမြီးအမောက်က မတည့် ... :P
စိန်ခေါ်ပို့စ်လေးတွေကနေ စီနီယာဘလော့ဂါတွေရဲ့ လင့်ခ်အသစ်လေးတွေ ရတာတော့ တီတင့်အတွက် အမြတ်ပေါ့ .... :)
9/20/2014 3:11 AM
ဇွန်ငယ်ငယ်တုန်းကလည်း ပန်းချီဝါသနာပါခဲ့သေးတယ်။ စာရွက်အလွတ်တွေ့တိုင်း လျှောက်ခြစ်တတ်လို့ စာအုပ်အကောင်းတွေဆို မေမေက သိမ်းထားရတယ်။ မမေရေးတာလေးဖတ်ပြီး လသာ၂မှာ သုံးတန်းတုန်းက ပန်းချီချိန်က အိမ်စာပေးလိုက်တဲ့ ပန်းချီကားလေးအကြောင်း သတိရသွားတယ်။ ၀ါဆိုလား၊ ကထိန်လားတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး၊ တခုခုအတွက် ဘုန်းကြီးလေးတွေထိုင်ပြီး တရားဟောနေပုံ ဆွဲခိုင်းလိုက်တာ။ အကျအနဆွဲပြီး နောက်ရက် ကျောင်းကားပေါ်မှာ သူများတွေကို ကြွား၊ အဲ.. ပြတာပေါ့။ အဲဒီမှာ ကျောင်းကားနောက်မှာ လိုက်ပေးတဲ့အကိုကြီးက ဇွန့်ပန်းချီစာအုပ်ယူကြည့်ပြီး... ဟဲ့ နင့်ဘုန်းကြီးက နားရွက်လည်း မပါပါလားဆိုတော့မှ... ဟုတ်ပ.. စီတန်းထိုင်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးငါးပါးစလုံးရဲ့ခေါင်းမှာ နားရွက်တွေမှ မဆွဲထားဘဲ။ အဲတော့မှ သူ့ဆီကပြန်ယူပြီး နားရွက်တပ်လိုက်ရတယ်။ :D လေးတန်းမှာ အာဇာနည်ကုန်းပုံဆွဲပြန်တော့ ဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့ အကန့်၉ကိုးကန့်ထက် ပိုဆွဲမိလို့ ဆရာမက ပြန်ပြင်ခိုင်းရတယ်။ :D အဲဒါတောင် ငါးတန်းရောက်တော့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ရှန်ကာပြိုင်ပွဲအတွက် ပန်းချီခန်းမသွားပြီး ပန်းချီဆွဲလိုက်သေးတယ်။ :D
9/20/2014 11:12 AM
မမေ ဆွဲထားတာတွေ ကြိုက်တယ်...ရေဆေးပန်းချီလေးတွေ အကြိုက်ဆုံး...:)
9/20/2014 1:37 PM
အဟီးး...ပန်းချီ လက်ရာမြောက်ပုံများ ကျနော်နဲ့နီးနီး ကျနော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံဆွဲတိုိုင်း မုန့်ကျိူးလိမ်တွေများလွန်းလို့ ဆရာမ ခေါက်တာ ခနခနခံရတယ်း))
ဒါနဲ့ သူကြီး ပန်းချီဆွဲတာ မမေပြောမှပဲသိတော့တယ် ။
ရေးမယ်ေ၇းမယ် ကျောင်းဆရာပြီးရင်ရေးမယ်နော့်း)
9/20/2014 3:52 PM
ကိုဧရာကတော့ ပန်းချီလည်း ၀ါသနာပါတယ်...သူ ၀ါသနာပါတာတွေကတော့များပါတယ်။ မသီတာကတော့ ဘာဝါသနာပါတယ် ဆိုတာ ခုထက်ထိမသိသေး...အေးလေ.. ငယ်သေးတာကို... :)
9/21/2014 10:37 AM
Angry Bird ရဲ့ face shape က orange shape လေမေရဲ့... မေ မမှားပါဘူး... သူတို့ angry bird ကို ဘာလို့လိမ္မော်သီးနဲ့ တူအောင် လုပ်လဲနော်... မေ့ပန်းချီလေးတွေ ကြိုက်ပါတယ်... မေ့အငွေ့ အသက်လေးလွှမ်းနေသလိုပဲ... အမဆို လူသာကြီးသွားတယ် ပန်းချီလက်ရာက သူငယ်တန်းပဲ...
9/21/2014 4:41 PM
9/21/2014 6:08 PM
မေလုပ်တာနဲ့ ပန်းသီး ပုံတောင် ဆွဲရဲတော့ဘူး... အဟိ... :P
9/22/2014 3:09 AM
အစ်မရေ ပန်းချီဆွဲရတာဝါသနာတူမို့ လင့်လေးပါယူသွာံးပြီနော်။ရေဆေးပုံရိုးရိုးရှင်းလေူးတွေသဘောကျတယ် အစ်မဆီကလေ့လာရမယ်
9/24/2014 6:05 AM
Hi sis,may I know what kind of school is this? My boy is2and half years old now. We lived in Singapore and planning to go back to Myanmar for my son education. I would like to send my son to the private school which can learn both English and Myanmar language. But, most of international school and private are teaching the subject by English language only. I want my son to love Myanmar's poem and language as well. Please kindly reply and advice to me. Thanks :)))